#Shabakadda Isbaanishka ee Diario Gol ayaa sheegtay in imaanshaha Coutinho uusan la dhacsaneyn Dembele | Get Latest News From Horn of Africa
Home Somali #Shabakadda Isbaanishka ee Diario Gol ayaa sheegtay in imaanshaha Coutinho uusan la...
#Shabakadda Isbaanishka ee Diario Gol ayaa sheegtay in imaanshaha Coutinho uusan la dhacsaneyn Dembele
Barcelona ayaa todobaadkan kala soo wareegtey dhigeeda Liverpool, ciyaaryahanka reer Brazil ee Coutinho, kaasoo ah kusoo qaadatey aduun lacageed dhan 192 Malyuun oo Dollar, wuxuu noqay xidiga 2aad ee aduunka ugu qaalisan.
Imaansha Camp Nou, ee wiilkaan ayaa waxay maqaar xanuun-jineysaa da’yarka reer France ee Dembele, maadaama ay isku boos kawada dheelaan, inakstoo Coutinho uu yahay mid meelo badan dheeli kara.
Laakiin, Dembele ayaa wuxuu hada aad uga walwalsan yahay imanasha Coutinho, wuxuuna dareemayaa inuu shaki ku jiro booskiisa joogtada ah ee Barcelona, sida laga soo xigtey Majalada Don Balon.
Don Balon ayaa aaminsan in Dembele uu filayo in Coutinho uusan ku dhibtoon doonin inuu helo booska koowaad ee Macalinka Barcelona sidaas darteeda, midkiisa uu yahay mid shaki badan uu ku jiro.
Skastaba, waxay sheegeysaa Jariiradaan in 20-sano jirkaan uu doonayo inuu kala hadlo kaalinta uu kooxda ku yeelan doono kadib imaanshaha Coutinho, waxa ay uga dhignaan doonto isaga iyo hadii ay samaeyn doonto.
Dembele ayaa wuxuu Barcelona uga yimid dhigeeda Dortmund, kadib markii ay kusoo iibsatey aduun lacageed dhan 105 Malyuun oo Yuuroo, wuxuuna kaliya hada udheelay Kulamo kooban isagoona dhawaan dhaawac kasoo laabtey.
Dhanka kale, mar sii horeysay isagoo uwaramayey warbaahinta ayaa wuxuu Coutinho, sheegay inuu ku farax-san yahay inuu kusoo biiro Barcelona, wuxuuna rajeeyey inuu koobab uu kula guuleysto camaaliqada La Liga.
Wuxuu yiri: “Waa riyo uu urumowday inaan kusoo biiro Barcelona, waxaana ku riyoon jirey markii aan yaraa, saaxibo badan ayaan halkaan ku leeyahay aad ayaana ugu farax-sanahay inaan udheelayo Barcelona.